I-Welded Mesh, i-Welded Wire Mesh, i-Stainless Steel Wire - i-Yuze
Insimbi Engagqwali Wire Mesh
Insimbi engagqwali Dutch Wire Mesh
Insimbi Engagqwali Ezinhlanu Ze-Heddle Weave Mesh
Insimbi Engagqwali Eshiselwe Wire Mesh
Intambo Yensimbi Engagqwali
I-Stainless Steel Fine Wire
Intambo Yensimbi Engagqwali(Mesh Weaving)
I-Stainless Steel Wire(I-Flexible Hose Media)
I-Stainless Steel Wire(Intambo Yezintambo)
Enye Ingxubevange Elukiwe Mesh
I-galvanized Wire Mesh&Iron Wire Mesh
I-Copper, Brass & Bronze Wire Mesh
Imikhiqizo Ye-Mesh Eqhubekayo Yokucubungula
I-Stainless Steel Slitting Mesh
I-Stainless Steel Filter Disc
OKUSHISAYO UKUDAYISWA IMIKHIQIZO
Intambo yensimbi engagqwali ine-ductility enhle, amandla aqinile aphezulu futhi ihlala isikhathi eside isetshenziswa, ikwazi ukuguquguquka okuphezulu, ukumelana nemihuzuko kanye nokumelana nokugqwala, ububanzi obufanayo, indawo ebushelelezi, umbala okhanyayo, njll. I-Stainless Steel Wire(Mesh Weaving) Amapharamitha: Ububanzi bocingo: φ0.10-φ4.00 mm Ibanga lezinto ezibonakalayo: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, njll. Okujwayelekile: ASTM, GB,DIN,JIS Amandla okuqina: 600N/mm2-800N/mm2 Izinhlelo zokusebenza: 70% we-Yuze Stainless Steel hydrogen annealing wire yethu isetshenziswa kakhulu kuma-mes...
Izici: Intambo yensimbi engagqwali ine-ductility enhle, amandla aqinile aphezulu futhi ihlala isikhathi eside ukusetshenziswa, ukuguquguquka okuphezulu, ukumelana nemihuzuko nokumelana nokugqwala, ububanzi obuyiyunifomu, indawo ebushelelezi, umbala okhanyayo, njll. Izintambo zensimbi engagqwali Amapharamitha: Ububanzi bentambo: φ0.10-φ4.00 mm Ibanga lezinto ezibonakalayo: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, njll. Okujwayelekile: ASTM, GB,DIN,JIS Amandla e-Tensile:600N /mm2-800N/mm2 Intambo yensimbi engagqwali Izinhlelo zokusebenza: I-Yuze Stainless Steel hydrogen annealing wire isetshenziswa njengokuguquguquka...
Insimbi engenasici isetshenziswe kabanzi kumakhemikhali, i-petrochemical kanye nokuhlola uwoyela, ezokuthutha, imboni yenuzi, amandla, izindwangu, i-aerospace, i-electronics, iphepha lokudla imithi kanye neminye imikhakha yezimboni, ezindaweni ezithile noma ingase ingabi yinsimbi eshintshwayo. Ngaphezu kwalokho, i-sub-mesh sta-nless steel kanye nokuhlobisa futhi kulula ukuyihlanza kanye nezakhiwo ze-antbacterial, emkhakheni we-con-sumer isetshenziswe kabanzi, njengokwakhiwa nokuhlobisa, i-kitc ...
I-Stainless Steel Square Woven Mesh ikakhulukazi ihlanganisa i-Plain /Twill Weave Mesh evamile; isukela ku-1mesh kuya ku-635mesh; "I-Tensile Bolt" Indwangu yokuBolting; I-Crimped Mesh kanye ne-Welded Mesh. I-Regular Plain/Twill Weave Mesh kanye ne-”Tensile Bolt “ Indwangu yokubhowula ngokuvamile eyenzelwe izinhlelo zokusebenza zezimboni. Konke ukulawulwa kwekhwalithi ye-Square mesh okusekelwe ku-ASTM E 2016-15 Okujwayelekile kanye nezinto ezingavuthiwe ezisuselwe kokujwayelekile kwe-ASTM A580-14. I-Raw material IBanga: 304, 304L, 316, 316L, 430, njll. Ukusetshenziswa okujwayelekile ezinhlelweni ezahlukene: · Ukulinganisa...
I-Yuze yenza indwangu yocingo yangokwezifiso ukuze ihlangabezane nezidingo zokuhlunga zamaklayenti. I-Dutch weave filter mesh ihlinzeka ngamakhono aphakeme okuhlunga ezinhlelo zokusebenza eziningi, okuhlanganisa ukucindezela, uphethiloli kanye nezihlungi eziwuketshezi ze-aerospace, i-petrochemical, izimboni zemithi, izimayini kanye nezimboni zokuhlanza amanzi angcolile. Insimbi engagqwali imelana nokushisa, i-asidi, ukugqwala nokuguga. Ngenxa yalezi zici, insimbi engagqwali inezikhala isetshenziswa kabanzi ezimayini, amakhemikhali, ukudla, petroleum, imithi, njll,...
Insimbi Engagqwali Ezinhlanu Ze-Heddle Weave Mesh ihlinzeka ngokuvula okuwunxande. Idizayini eyingqayizivele yale mesh ingasiza ekwandiseni ukugeleza kwamanzi nokugeleza kwezakhiwo. Le mesh futhi inobuso obushelelezi ohlangothini olulodwa, olusetshenziswa kakhulu ekuhlungeni izimboni zamakhemikhali e-petroleum, ngendlela yamaribhoni okuhlunga nezinto zokuhlunga. Insimbi Engagqwali I-Five Heddle Weave Mesh Izici 1. Inikeza ukuvuleka kukanxande 2. Izici zokudonsa amanzi ezithuthukisiwe nokugeleza 3. Inikeza indawo ebushelelezi ukuze kukhishwe kalula isihlungi ca...
I-Stainless Steel Crimped Wire Mesh yenziwa ngezinto ezahlukahlukene ngomshini we-crimping mesh, uhlobo lwemikhiqizo yezintambo ezitholakala endaweni yonke enezimbobo eziyisikwele noma eziwunxande. I-Stainless Steel Crimped Wire Mesh ingaziwa futhi ngokuthi yi-iron crimped mesh, insimbi engagqwali eboshiwe, insimbi emnyama enobucwebe ngokwezinto ezahlukahlukene. I-Yuze ihlinzeka ngokuyinhloko nge-Stainless Steel Crimped Wire Mesh Material: 302,304,304L,316,316L Izici: Isakhiwo esiqinile nesitayela esiqinile esiCrimped: Insimbi Engagqwali Ecrimped ...
I-Stainless Steel Welded Wire Mesh ikhiqizwa yi-platoon welding. I-Stainless Steel Welded wire mesh ishiselwe ngekhwalithi ephezulu yocingo lwensimbi enekhabhoni ephansi bese idluliswa futhi yenziwe ipulasitiki ngocwecwe olubandayo, ucwecwe olushisayo kanye ne-PVC enamathelayo. I-Stainless Steel Welded wire mesh yenziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi engagqwali. Iwubufakazi be-asidi obuningi, imelana ne-alkali, ishiselwe ngokuqinile, inhle futhi isetshenziswa kabanzi. I-Stainless Steel Welded Wire Mesh Imininingwane: I-Stainless Steel Welded Wire Mesh Isici: inhlanganisela enhle kakhulu...
I-YUZE WIRE MESH CO., LTD ingumkhiqizi ochwepheshe wezintambo zensimbi ezingenasici kanye ne-wire mesh e-Anping, e-China kusukela ngo-1986. Inani lethu lonyaka lingaphezu kwezigidi ezingu-40 zama-USD; Ama-80% emikhiqizo athunyelwa emazweni angama-30 nasezifundeni.
Sinezimboni ezi-3 nehhovisi legatsha elilodwa; enezinduku ezingaphezu kuka-200: Ifektri ye-One Stainless Steel Wire Rod; Ifekthri eyodwa yokudweba i-Stainless Steel Wire Drawing; Ifekthri yokweluka i-Mesh eyodwa; Ihhovisi legatsha elilodwa eShijiazhuang.
I-Yuze ifinyelele uhlelo lwekhwalithi ye-ISO: GB/T19001-2016 /ISO9001:2015 okuyisisekelo esiyinhloko semisebenzi yokuthengwa kwempahla, inqubo yokukhiqiza nokulawula ikhwalithi.
IYuze inamafekthri amathathu nehhovisi legatsha elilodwa, elinabasebenzi abangaphezu kuka-200
Iminyaka yokuhlangenwe nakho
Ukusebenza kwezimboni zaseYuze kwaqala ngonyaka we-1986 futhi ibhizinisi lokuthumela ngaphandle laqala kusukela ngonyaka ka-2005
I-Yuze izuza idumela eliphezulu kumakhasimende aphesheya nasekhaya, siqinisekisa ukuhlinzeka ngensizakalo engcono nemikhiqizo encintisanayo kozakwethu bebhizinisi.
IMICIMBI NEMIBUZO YOHWEBO
Umshini omusha we-spooling online
Muva nje, isethi entsha yomshini we-spooling iqala ukusebenza ngokusemthethweni enkampanini ye-Yuze. Umshini ungasebenzisa i-PL, PT kanye nohlobo lwe-NP series spools, olunothisa kakhulu ukupakishwa kwethu. Njengamanje, singakwazi ukuhlinzeka ngamaphakheji e-spools ngale ndlela elandelayo: Sicela usithinte uma unezidingo noma...
Indawo Yesitoreji Yensimbi Engenasici Ibalulekile
Insimbi engagqwali iwuhlobo lwentambo yensimbi engagqwali, engagqwali nhlobo, futhi ukusebenza kwayo kokugqwala emithonjeni yamakhemikhali ayizinzile ngokukhethekile. Ukumelana nokugqwala kwe-stainless steel wire mesh kuthintwa izakhi zayo zamakhemikhali njenge-nickel, i-chromium, iphoyisa...
Siyanamukela nonke ukuthi nivakashele u-Yuze
Lapho ngibuyekeza isithombe sokuvakasha kwekhasimende, ngakhumbula amakhasimende ase-Korea nase-Australia avakashele isitolo sethu somsebenzi futhi axoxa futhi ekamelweni lethu lomhlangano. Kwaba inkumbulo enhle ukuthi zonke izivakashi kanye nabasebenzi abahlobene nenkampani babambe iqhaza engxoxweni futhi kuzoba muhle umsebenzi wokuqonda...
Kuyindlela enhle yokuphromotha lapho ikhasimende lisibona kweminye imibukiso, ikakhulukazi embukisweni othile wochwepheshe, izihlobo ezinemikhiqizo nemikhiqizo izicelo.Besihlanganyele imibukiso emi-4 eminyakeni emi-2 edlule.Umnyango wethu wezokuthengisa ube nokuqonda okujule kakhulu mayelana...
Ikheli Lefekthri yase-Yuze:
ISouth Zhengrao Road Anping County, Hebei China
Ikheli Lehhovisi Legatsha lase-Yuze:
insimbi engagqwali nokwelukiweyo anezikhala, 20mesh Stainless Steel Wire Mesh Isihlungi Disc, Izihlungi ze-Stainless Steel Wire Mesh Disc, ucingo, 316 I-Stainless Steel Wire Mesh Filter Disc, 316 insimbi engagqwali,